मोदी आउँदा काठमाडौंका सडक खाली गराइने, कहाँ कहाँ हुन्छ रूट खाली ?
काठमाडौं, २७ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजकीय नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं आइपुग्दा यहाँका सडक खाली गराइने भएको छ । मोदीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उनी हिड्ने रुटमा सडक खाली गराइन लागेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । रोडमा अन्य सवारी साधनहरुलाई २५ मिनेटसम्म चल्न दिइने छैन । उक्त समयमा सवारी चालकहरुले वैकल्पिक मार्ग अपनाउनुपर्ने छ । मोदीको सवारीका कारण शुृक्रबार र शनिवार सर्वसाधारणहरुले सास्ती भोग्नु पर्ने भएको छ ।
यस्तो छ मोदीको रुट
पटनाबाट सैनिक हेलिकोप्टरमार्फत शुक्रबार विहान जनकपुर आइपुग्ने मोदी त्यहाँ जानकी मन्दिरमा पूजा गरेपश्चात शुक्रबार दिउँसो १ः३० मा काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन् । विमानस्थलबाट गौशाला, चावहिल हुँदै बौद्धस्थित हायात होटलमा पुग्नेछन् ।
मोदीको हेलिकोप्टर विमानस्थलमा अवतरण भएलगत्तै सिनामंगलदेखि सडक खाली गराउने तयारी हुनेछ । मोदीको कार्गेड चावहिल पुगेपछि मात्र सिनामंगलबाट सवारीसाधन आवगमन सुचारु हुनेछ ।
त्यस्तै शुक्रबार नै दिउँसो ४ बजे मोदी हायात होटलबाट ‘गार्ड अफ अनर’ ग्रहणका लागि टुँडिखेल प्रस्थान गर्नेछन् । त्यसका लागि चावहिल, गौशाला, एयरपोर्ट, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर हुँदै उनी टुँडिखेल जानेछन् । ४ बजेको समयमा सो रुट पनि खाली गराइनेछ । मोदी गौशाला कटेपछि मात्र बौद्धबाट सडक खुला गरिनेछ । करिव ५ मिनेटको टुँडिखेमा बसाईपछि मोदी ४ः३० मा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग भेट्न बहादुर भवन जानेछन् लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्न शीतल निवास पुग्नेछन् ।
शीतल निवासबाट मोदी साँझ ६ बजे महाराजगञ्ज, चावहिल, गौशाला हुँदै द्वारिकाज होटलमा पुग्नेछन् । बेलुका हायातमै फर्कने कार्यक्रम छ ।
शनिबार बिहानै ६ बजे मोदी होटलबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर जानका लागि विमानस्थल पुग्नेछन् । १०ः३० मा काठमाडौं फर्किएपछि उनी पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शनका लागि जाने कार्यक्रम रहेको छ । पशुपतिनाथबाट हायात होटल जाँदा पनि सडक खाली हुनेछ ।
शनिवार दिउँसो २ बजे नागरिक अभिनन्दनका लागि सभागृह प्रस्थान गर्नेछन् । चावहिल, महाराजगञ्ज, लाजिम्पाटको रुट भएर उनी सभागृह जानेछन् । दिउँसो ३ः३० मा सभागृहबाट बानेश्वर, तीनकुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत स्वदेश फर्किनेछन् ।
मोदीको सवारीका बेला कम्तीमा १० मिनेट तथा बढीमा २५ मिनेटसम्म सडक खाली गरिने ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ ।
माेदीकाे नेपाल भ्रमणclose
उपेन्द्रको अगाडि राजेन्द्रको आरोप- सरकार नै संघीयता खारेज गर्न लागिपरेको छ
अोलीको अाश्वाशन- नयाँ उद्योगको स्थापना गरी रोजगारी सृजना गरिन्छ
डा.भट्टराई भन्छन्-वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विप्पा सम्झौता गर्न ढिलाई नगरौं
अमेरिका र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सात दशकभन्दा पुरानो जगमा अडिएको छ : पोम्पियो
प्रदेश २, मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २ गते २ नम्बर प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौंका विभिन्न ३ स्थानमा बम भेटियो, बम लिएर हिंडेका दुई पक्राउ
झापामा प्रहरी चौकी नजिकै बम विष्फोट
गैंडाकोटमा दुईवटा ट्रकमा आगजनी, विप्लव समुहले गरेको आशंका
भक्तपुरमा बम निष्क्रिय
विलियनले गरे कोन्टेलाई कटाक्ष
डेबिड सिल्भाले पनि लिए अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास
बार्सिलोना आउँलान् त पोग्वा !
प्रिन्सिपलबाट १२ कक्षामा पढ्ने किशोरी ६ महिनादेखि बलात्कृत
ओली सरकारको ५ महिने कार्यकालका उपलब्धीहरु
असर्इ हत्यारा राज्यमन्त्रीलाई धरौती पनि नलिई रिहा
प्रकाण्डलाई ४८ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वाेच्चको आदेश
नयाँ ऐनप्रति चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण, दियो यस्तो चेतावनी
बहुचर्चित चिकित्सा विधेयकमाथिको संशोधनमा बुधबारदेखि छलफल